Shina 500ml Ranomasina Fotsy maivana sy crème de vie miaraka amina orinasa sy mpamatsy ao anaty lafaoro sy Funnel | Hoyer
Tavoahangy fitaratra manokana
Tady menaka manitra fiara
Tavoahangy fanafody vita amin'ny vera
Tavoahangy feno menaka
Ny fitahirizana Jar
Tavoahangy divay tavoahangy
Tavoahangy sira sy dipoavatra
Tavoahangy fisotroana fitaratra
500ml Dark Brown Oil & Vinegar Cruet miaraka amin'ireo mpitrandraka sy Funnel
Zavamaniry tsy misy fanafody: - vy vy 18/8 misy satrony famehezana, mifanentana tsara amin'ny vatan'ny tavoahangy ny fantsom-tsindrona, miala tanteraka ny vovoka. Afaka mandraraka sy mizara menaka mahandro amin'ny olona tsy misy fofona ny menaka rehetra. Mety amin'ny fifangaroana amin'ny menaka fandrahoan-kena, ny fanandramana ary ny vinaingitra.
Volume: 500ml / 17 oz
Haavo: 300mm / 11.8 santimetatra
savaivony: 58mm / 2.28 santimetatra
habe hafa misy: araka ny fitakianao
Color: volontany mainty na araka izay takianao
Dispenser menaka oliva tsara tarehy: - Ny tavoahangy menaka oliva Hoyerglass misy fantsona misy nozzle, dia mahatonga azy ho tsy misy dikany kokoa ny hizara solika - tsy dia mihinana solika intsony ary amin'ny sakafo mahasalama.
Ataovy vaovao tsara ny menaka olivao: - ny fitaratra volontsôkôlà mainty dia miaro tsara ny menaka oliva amin'ny tara-masoandro, manitatra ny fiainany amin'ny talantalana. Ny satroka mainty hoditra sy ny paty anatiny dia ahafahana mitahiry fitehirizana maharitra.
Mamaha olana famenoana: - 18/8 fatana fandrefesana vy tsy voatanisa dia manampy hamenoana sy famenoana tsiranoka mora, nefa tsy mitete. Madio ny zava-drehetra ary hanampy anao hanaisotra ny tanana mifikitra.
Fividianana tsy misy atahorana:- raha manana fanontaniana momba ny vokatrao izahay dia azafady mba hifandraisanao aminay ary hiezaka ny zava-tsoa izahay mba hahitana vahaolana mahafa-po ho anao ao anatin'ny 24 ora.
Hoyerglass 17 oz tavoahangy menaka oliva afaka manome anao:
1. 18/8 fatana fandrefesana vy tsy voatanisa dia manampy amin'ny famenoana sy fameno feno rano tsy misy leakage.
2. 18/8 spout vy tsy voatanisa miaraka amin'ny satroka tavoahangy voahidy mba hialana vovoka.
3. Ny fitaratra maizina mavokely dia miaro tsara ny menaka oliva amin'ny tara-masoandro, manitatra ny fotoana fitahirizana.
4. Ataovy mora ny mizara ny fatran'ny menaka marina - manala menaka kely ary mihinana sakafo mahasalama.
Fikarakarana sy fanadiovana:
1. Ny faritra rehetra amin'ny setran'ny menaka oliva Hoyerglass dia azo sasana ao anaty lovia.
2. Aza mampiasa volon'ondry, fehikibo, na fanadiovana mahery. Raha manapa-kevitra ny hanasa tànana ianao, dia mampiasa rano malefaka sy rano mafana.
Size Boky: 500 ml Haavony: 30 cm Diameter: 5.8 cm
Boky: 17 oz Haavony: 11,8 santimetatra Diameter: 2,28 santimetatra
Color Volontany matroka ny fanontana na ny loko namboarina dia azo ekena ihany koa
MOQ 20 000 pcs Tsy ampy ny habetsahana ekena koa raha manana tahiry isika
Fanodinana amin'ny paositra Sary hosodoko, halavirana, efijery, sary hosodoko, hamonosana, fametahana volamena, famafazana volafotsy sns.Logo voarindra, O design ny OEM dia misy koa.
Package Carton, pallet na araka izay takianao
Sample a. santionany amin'ny tahiry:QTY: 1–5 pcsVidiny: nomena malalaka
Fotoana: 3-5 andro
b. santionany namboarina:QTY: araka ny fitakianao Vidiny: arakaraka ny lamina manokana sy ny vokatra
Fotoana: arakaraka ny endrika manokana
Price Ny vidiny dia natao ho an'ny fanondroananao fotsiny, azo ovaina amin'ny habetsaky ny sainao manokana. Ary raha mila akora mifandraika ianao dia manontanio anay, dia hanome ny serivisy tsara indrindra aminao izahay.
Previous: 2 oz Amber Round Glass Jar miaraka amin'i Inner Liner sy Lid mainty
Manaraka: Milina fanosorana sira sy voasarimakirana
siny ho an'ny menaka sy vinaingitra
tavoahangy menaka fahandroana
tavoahangy vera misy tavoahangy
dispenser tavoahangy menaka
tavoahangy tavoahangy misy menaka
4 oz Spice Glass Shaker miaraka amin'ny Labana Chalkboard ...
Milina fanosorana sira sy voasarimakirana
Tazana fitahirizam-bidy mahitsy, Jar-bary amin'ny alàlan'ny sakafo miaraka amin'ny ...
Address:Efitra 1106, gorodona 11 (Mpianatra ao amin'ny Kolejin'i Xuzhou Venture Park), No.271, lalana Qingnian, Distrika Yunlong, Xuzhou
Phone:+ 86- (0) 516-83669687